विप्लव नेतृत्वको समूहले नेपाली सेना अपहरण गरेको घटना किन गुपचुप राखियो ? «
विप्लव नेतृत्वको समूहले नेपाली सेना अपहरण गरेको घटना किन गुपचुप राखियो ?
प्रकाशित मिति : १२ जेष्ठ २०७६, आईतवार ०९:२८
काठमाडौं । प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको समूहले नेपाली सेनाका एक जवानलाई अपहरण गरेको छ । अपहरणको उक्त घटना विप्लव र सेना दुवैतर्फबाट एक महिनासम्म गुपचुप राखिएको छ ।
रुपन्देहीको सैनामैनास्थित सेनाको श्री नम्बर २ तालिम गणमा तालिमरत सैनिक जवान सुरेन्द्रबहादुर शाहीलाई वैशाख १६ मा विप्लव समूहका कार्यकर्ताले अपहरण गरेका थिए । छुट्टीमा घर गएका शाहीलाई विप्लव समूहले जाजरकोट जुनिचाँदे गाउँपालिका–२ स्थित आफ्नै घरबाट अपहरण गरेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
सैनिक जवान शाहीका बाबु वीरबहादुर कांग्रेसका तर्फबाट सोही वडाका अध्यक्ष हुन् । अपहरणको यो घटना वैशाख १६ गतेको हो । अपहरणलगत्तै शाहीलाई विप्लव समूहले अज्ञातस्थलतर्फ लगेको थियो । अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई प्राप्त सूचनाअनुसार शाही परिवारसँग विप्लव समूहले दुई लाख रुपैयाँ चन्दा मागेको थियो ।
वीरबहादुरले चन्दा दिन अस्वीकार गरेका थिए । चन्दा नदिएकै कारण शाहीलाई कार्यकर्ताले अपहरण गरेका हुन् । विप्लव समूहले जुनिचाँदे गाउँपालिकालगायत जाजरकोटका अधिकांश गाउँमा २० हजार देखि ४ लाखसम्म चन्दा उठाउने गरेका छन् ।
शाही अपहरणका लागि २० र २५ जनाको समूहको टोली उनको घर पुगेको थियो । त्यसमध्ये ९ जना महिला रहेको सैनिक स्रोतले उल्लेख गरेको छ । शाही विप्लवका कार्यकर्ताको पञ्जाबाट भागेर तालिमरत स्थान सैनामैनास्थित श्री नम्बर दुई गणमा फर्केका छन् । शाही कति दिन अपहरणकारीको कब्जामा रहे त्यो विषय भने खुलेको छैन ।
शाहीलाई विप्लवका कार्यकर्ताले अपहरण गरेको जंगी अड्डाका अधिकारीले पुष्टि गर्दै भने, ‘अपहरणमा परेका सैन्य अधिकारी सेनाको सम्पर्कमा आएका छन् । उनी सकुसल छन् ।’ अपहरणका बेला विप्लव समूहले आफूलाई कुनै शारीरिक यातना नदिएको शाहीले जानकारी गराएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को फागुन २८ को बैठकले विप्लव समूहलाई आपराधिक समूह किटान गरी उनीहरूको गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
प्रतिबन्धपछि सुरक्षा निकायले विप्लव समूहका कार्यकर्तालाई दिनहुँजसो पक्राउ गरिरहेको छ । विप्लव समूहले सैनिक अधिकारीलाई अपहरण गरेको घटनालाई लिएर जंगी अड्डा गम्भीर बनेको छ । सेनालाई उत्तेजित गराउने उद्देश्यले सैनिक अधिकारीको अपहरण गराइएको हुुन सक्ने जंगी अड्डाको बुझाइ छ ।
‘नेपाली सेनालाई उत्तेजित गराउने उद्देश्यले यस्ता गतिविधि गराइएको हुन सक्छ,’ एक उच्च सैनिक अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सेनालाई उत्तेजित बनाई विप्लवका गतिविधिविरुद्ध परिचालित गराउने षड्यन्त्र त होइन भन्ने आशंका बढिरहेको छ । सैनिक नेतृत्व तहबाटै यसमा विश्लेषण पनि भइरहेको छ ।’